မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	← Older posts
# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁)Published March 10, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီဇင်ဘာလထဲ တုန်းက “မွေးနေ့ဗေဒင်” ကို နေ့စဉ် တင်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်း သွားရပါတယ်။ အခု လောလောဆယ် လူတိုင်း ကိုယ့်မွေးနေ့ကို ရောက်လာရင် တနှစ်တာရဲ့ အကောင်းအဆိုးကို ကြိုတင်သိနိုင်အောင် ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခု ရေးဆွဲနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပရိုဂရမ်က ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ကြာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပရိုဂရမ်လေးကို တင်မပေးမှီ လောလောဆယ် “မဟာဘုတ်” နည်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွက်လို့ရမယ့် “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်း” လေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ မဟာဘုတ် တွက်နည်းလေးက အင်မတန် ရိုးရှင်းပါတယ်။ “တွက်နည်း” လို့သာ ပြောရတာ ဘာမှ သိပ်တွက်စရာ မလိုပါဘူး။ လွယ်သမှ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်ကန်မှု ရာနှုံးကတော့ မနည်းလှဘူးခင်ဗျ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ပြီးတွက်ကြည့်လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကို ပြန်ပြီး လက်တွေ့တွက်ကြည့်။ ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ “ကောင်းတဲ့နှစ် နဲ့ ဆိုးတဲ့နှစ်” တွေကို တွက်ကြည့်။ အနည်းဆုံး (၇၅-၈၀) % မှန်ဖို့ များပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 98 Comments	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများPublished February 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	၉ ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ အတော် ရေပန်းစားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ “မြန်မာ့ဂမ္ဘီရ လောက” မှာ အတော်ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း အဓိဌာန်” တို့၊ “၉ န၀င်း မိုးအလင်း” တို့၊ “၉ န၀င်းစီး ယတြာ“ တို့၊ “၉ န၀င်းသင်္ချိုင်း သံဒါး”တို့ “၉ န၀င်း ထွက်ရပ်လမ်း”၊ “၉ န၀င်း ဆေးတော်ကြီး” “၉ မြို့ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်” . . “၉ တိုင်း ၉ ဌာန” “တြိစက္က ကိုးန၀င်းဇာတာ” တို့ဆိုတာ ပုတီးလိုင်း၊ ဗေဒင်လိုင်း၊ ဂမ္ဘီရလိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နားမစိမ်းကြပါဘူး။
တကယ်တော့လည်း ၉ ဂဏန်းဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဂဏန်း တစ်ခုပါ။ ရှေးခေတ် ချားလ်ဒီးယန်းလူမျိုးတွေဟာ သင်္ချာဗေဒ (ဂဏန်း ဗေဒင်) ကို တီထွင်ကြံဆခဲ့ကြရာမှာ “၉ ဂဏန်း” ကို ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဂဏန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မြင့်မြတ်တဲ့ဂဏန်းတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြ ပါတယ်။ အလွန်စွမ်းအားကြီးတဲ့ ဂဏန်း တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သင်္ချာဗေဒပညာမှာ ၉ ဂဏန်းကို “အင်္ဂါဂြိုဟ်” ပိုင်ဂဏန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေမယ့် တကယ်တော့ ၉ ဂဏန်းဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ဂြိုဟ်ပရိယာယ် တွေထက် သာလွန်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ပြောချင်တာက ၉ ဂဏန်းကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ပိုင် ဂဏန်းအဖြစ် သတ်မှတ် ထားတာဟာ အပြည့်အ၀ မှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ, နာမက္ခရဗေဒ, သင်္ချာဗေဒ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 18 Comments	ကားဈေးကွက် နှင့် မြန်မာပြည်Published February 20, 2010 | By dr.tin bo bo	မနေ့က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အခုရက်ပိုင်း သူ ကားဝယ်ရင် ကောင်းပါ့မလားလို့ မေးလာပါတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းမျိုးဟာ (အရေးကြီး တဲ့မေးခွန်းလို့) ယူဆမိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ချက်ခြင်း ပြန်ဖြေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ “အခုရက်ပိုင်း မ၀ယ်ပါနဲ့ဦး” သင်္ကြန်ပြီးအောင် ခေတ္တစောင့်ကြည့်ပါဦး . . လို့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဒီကိစ္စလေးကို ကိုယ့်စာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေထဲက ကားနဲ့ ပတ်သက် နေသူတွေအတွက် လည်း အကျိုးရှိကောင်း ရှိမလားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, Horary Astrology, hura veda, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |9Comments	# ဗေဒင်အချုပ် မဟာဘုတ်Published February 10, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မဟာဘုတ်ဗေဒင်ဟာ အခုအချိန်အထိ သိထားရတဲ့ သမိုင်း အချက်အလက်တွေ အရတော့ “မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာ” စစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆန်းဗေဒင် ပညာတွေလို့ လူသိများတဲ့ မဟာဘုတ်၊ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ နဲ့ သုံးတန်ပေါ်နိစ် နဲ့ ဆန်းဗေဒင် တွေ ထဲမှာ “မဟာဘုတ်” ပညာနဲ့ “သုံးတန်ပေါ်နိစ်” တို့သာ မြန်မာ့မူ စစ်စစ်လို့ ပြောနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ” ကို တီထွင်ခဲ့သူလို့ အသိအမှတ် ပြုခံရတဲ့ “အတုလ ခင်ကြီးဖျော်” မမွေးခင်ကတည်း ရှိနေတဲ့ အိန္ဒိယ ဗေဒင်ကျမ်း တွေထဲမှာရော၊ အနောက်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်း သင်္ချာဗေဒကျမ်း တွေမှာပါ – “သူရဇ္ဇ၊ သောကြ၊ ဗုဒ္ဓ၊ စနြေ္ဒာ၊ သောရီ . . . စတဲ့ “ဆပွတ်ရိုက်” သွားတဲ့ ဂြိုဟ်အစီအစဉ် နေရာချထားမှုတွေကို သွားတွေ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က တော့ ဆရာတော် “ခင်ကြီးဖျော်” လို အပေါ်တစ်လုံး/အောက်တစ်လုံး အစီအစဉ်နဲ့ ချ, သွားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးနေကြတဲ့ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာတိုင်ကတော့ ဆရာတော် “ခင်ကြီးဖျော်” ကိုယ်တိုင် ထပ်ဆင့် တီထွင်ခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက “သူရဇ္ဇ၊ သောကြ၊ ဗုဒ္ဓ၊ စနြေ္ဒာ . . . ဟာ မြန်မာ့မူ အစစ်မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာပါ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 28 Comments	# အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံPublished February 5, 2010 | By dr.tin bo bo	.
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ, အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	# ဟေတီ ငလျှင် နှင့် ဆရာကြီး ကာလာစန်Published January 17, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကာရစ်ဘီယံ ကျွန်းစုနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ “ဟေတီ” နိုင်ငံမှာ အခုပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီ (၁၂)ရက်နေ့မှာ ပြင်းအားအဆင့် (၇) ကျော်တဲ့ ငလျှင်ကြီး လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ လူအသေအပျောက် စာရင်းမကောက်နိုင်လောက်အောင် ကသောင်းကနင်းတွေ ဖြစ်နေတာမို့ ဒီကနေ့ (၁၇)ရက်နေ့ကျမှ လူအသေအပျောက်ကို (အနီးစပ်ဆုံး) ခန့်မှန်းနိုင်ပါတော့တယ်။ အနည်းဆုံး လူငါးသောင်း အထက်မှာ သေကြေပျက်စီးဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ကပ်ဘေးဒုက္ခတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လူအသေအပျောက်စာရင်းဟာ ဒီထက် တိုးလာဖွယ် ရှိပါတယ်။ (ဒီဆောင်းပါးရေးပြီး နောက်ထပ် ၆နာရီအကြာမှာ သိရတဲ့သတင်းအရ လူဦးရေ သေဆုံးမှုဟာ ၂-သိန်း အထိ ရှိနိုင်တယ် လို့ သိရပါတယ်)
“နူရာဝဲစွဲ ၊ လဲရာ သူခိုးထောင်း” ဆိုသလို ဟေတီနိုင်ငံဟာ မနှစ်ကမှ မုန်တိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့လို့မှ မပြီးသေးဘူး အခု ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ငလျှင်ကြီးက ထပ်ဆင့်လာတာဟာ လူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကိုက နိမ့်လွန်းလို့လား၊ ကမ္ဘာကြီးဘဲ ပျက်စီးချိန် နီးလာလို့ ဘဲလား ဆိုတာ မပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဆိုးဝါးလာတဲ့ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဟာ ဒီအတိုင်းဆို အတော်ကြီးကို သတိပြုရမယ့် အနေအထားကို ရောက်နေပါပြီ။
ဒီငလျှင်ကြီးကို လှုပ်မယ့် နေရာဒေသ အနီးစပ်ဆုံးရော၊ လှုပ်မယ့် လ,ပိုင်းရော တိတိကျကျ ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သူကတော့ “ဆရာကြီး ကာလာစန်” ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးကာလာစန်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ဗေဒင်ပညာသင်ဘ၀ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ခရီးတစ်လျှောက်၊ တွေ့ဘူးသမျှ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များမှာတော့ “ပညာအရာမှာလည်း အတော်ဆုံး၊ စိတ်သဘောထားအရာမှာလည်း အပြည့်ဝဆုံး” ဆရာကြီးတစ်ယောက်ပါ။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင် | Tagged ဟေတီ ငလျှင် နှင့် ဆရာကြီး ကာလာစန်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 10 Comments	# ဇန်န၀ါရီလအတွက် (၇)နေ့ ဗေဒင်Published January 10, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	ယခုလ ဇန်န၀ါရီလဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးလ လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလထဲမှာ ထူးခြားတာက (၇)ရက်သားသမီးများအနက် “ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ရာဟု သားသမီး” များသာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်နေ့ သားမီး များမှာ အကောင်း နဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲ နေကြမယ့် လ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းအား/ဆိုးအား ပြင်းထန်မှုတော့ သိပ်မရှိ လှပါဘူး။ သက္ခတ် အညံ့ထဲမှာ ရှိမနေသူများ သာမန်အညံ့ လောက်ပါဘဲ။ သက္ခတ် ကောင်းမှာ ရောက်နေရင်တော့ အညံ့တောင်မှ သိပ်ပြီး မရှိ နိုင်ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၉) ဒီဇင်ဘာလတုန်းက (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ကောင်းအား/ဆိုးအား ပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့ ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီဇင်ဘာ လထဲမှာ ကမ္ဘာအ၀ှမ်း ကပွဲရုံမီးလောင်မှု၊ ရထားဗုံးကွဲမှု၊ အသေခံ ဗုံးခွဲမှု များ ကြောင့် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေကြေ ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကို သတိထား မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလဟောကိန်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးနေ့သားသမီးအဖြစ် အင်္ဂါသားသမီး ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ပေးထားတဲ့အတိုင်း “သက္ခတ်” ကောင်းထဲမှာ ရောက်နေကြတဲ့ အင်္ဂါသားသမီး အတော်များများ ကံကောင်းကြတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ “သောကြာ” သက္ခတ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ အင်္ဂါသားဖြစ်တဲ့ “ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန်” ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ထဲမှာဘဲ နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ “အမျိုးသားစာပေဆုကြီး” ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ သက်တမ်း အနှစ်(၄၀) ကျော်အတွင်း မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်တာဖြစ်လို့ ထူးခြားလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယေဘူယျတော့ ယေဘူယျပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် လူအများစုနဲ့ သက်ဆိုင်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ယခုလ(ဇန်န၀ါရီလ) ၇ရက်သားသမီး ကံဇာတာ အကျဉ်းချုပ်
= ကြာသပတေးသားသမီး (အလွန်ညံ့)
= စနေ သားသမီး (အကောင်း/အညံ့ ဒွန်တွဲနေ၊ အညံ့များ)
= တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ သောကြာ သားသမီး (ကောင်း/ဆိုး သင့်ရုံ)
= ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ရာဟု သားသမီး (အလွန်ကောင်း) ဆိုပြီးတော့ တွေ့ရပါတယ်။
ကျန် အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဖက်က Heading Pages ထဲက “လစဉ်ဟောကိန်းများ” ဇန်န၀ါရီလ(၂၀၁၀) ထဲမှာ ၀င်ဖတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာကို Click လုပ်လိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |4Comments	# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished December 31, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, burmese zodiac, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, myanmar zodiac, myanmar zodiacal horoscope, myanmar zodiacal signs, zodiac astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ | 89 Comments	# စပ်မိ စပ်ရာ 2010Published December 28, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကျွန်ုပ် နှင့် ကိုသိန်းဖေ တို့၏ ဆွေးနွေးခန်းများ ရပ်ဆိုင်း ခဲ့သည်မှာ အတော်ပင် ကြာခဲ့လေပြီ။ ယခုမူ မကြာခင် ရောက်ရှိ လာတော့မည့် Happy New Year 2010 နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ် နှင့် ကိုသိန်းဖေတို့၏ ဆွေးနွေးမှုများကို (ကိုသိန်းဖေ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ) တင်ပေး လိုက်ပါသည်။ အမှန်အားဖြင့်မူ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဟောကိန်းကဲ့သို့ ဧရာမ ဟောကိန်းကြီး များကို ပြုလုပ်ရန် ပညာမပြည့်စုံသေးဟု ယူဆသလို၊ ဟောပြော ရန်လည်း သတ္တိမရှိပါချေ။ “ထိုင်နေ အကောင်းသား၊ ထ,သွားမှ ကျိုးမှန်းသိ” ဆိုသကဲ့သို့ ငြိမ်ငြိမ် နေလျှင် အကောင်း၊ ဟိုဟော ဒီဟော ထ,ဟောကာမှ သောက်ရှက် ကွဲစရာ ဖြစ်သွား နိုင်သည်ကို ကောင်းကောင်း သိနားလည်ထားသူ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတင်ပြမည့် ဆောင်းပါးမှာ လည်း လာမည့် 2010 နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗေဒမိတ်ဆွေ အခြင်းခြင်း အလာပ သလာပ ပြောကြားချက်များသာလျှင် ဖြစ်ပြီး မည်သည့် “ဟောကိန်း” မှ မဟုတ်ပါချေ။ ရောက်တတ်ရာရာ ထင်ရာမြင်ရာပေါ့ဗျာ။
ကိုသိန်းဖေ။ ။ ဆရာရေ၊ လုပ်ပါဦးဗျာ – ကျွန်တော့်အဖြစ်က “မင်းသားဖြစ်ကာစ၊ က,ကောင်းတုန်း ဇာတ်ခေါင်းကွဲ သွားတဲ့ မင်းသားလို” ဖြစ်နေပြီဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးခန်းလေး ဆက်လုပ်စမ်းပါဦးဗျာ။
ကျွန်ုပ်။ ။ အိုင်ဆေး ကိုသိန်းဖေ။ ဆောတီးဘဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားနဲ့ သိပ်မထူးပါဘူး။ “ယနေ့ညအဖို့ စိတ်ရှိလက်ရှိ က,ပြချင်ပါသော်လည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်း . . . . ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေး ပြောသလိုသာ ပြောလိုက်ချင်တော့တာဘဲဗျာ။ ခင်ဗျားလည်း မြင်တဲ့ အတိုင်းဘဲလေ။ ကျန်းမာရေးက ဒီနှစ်ထဲ သိပ်မကောင်းဘူးဗျ။ အလုပ်ကို စိတ်ရှိသလောက် လုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged ငလျှင်နှစ်, စပ်မိ စပ်ရာ 2010, ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု, နက္ခတ်ဗေဒင်, သပိတ်မှောက်မှုများ, သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ ငလျှင် | 14 Comments	# 2010 နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်Published December 23, 2009 | By dr.tin bo bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင် | Tagged 2010 နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . .Published December 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးမှန်သမျှ ဆောင်းပါးရှည်တွေချည်းသာ ဖြစ်နေလို့ ကနေ့တော့ ဆောင်းပါးတိုလေး တစ်ခုကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ စောစောလေးက ကျွန်တော့်သမီး (စနေသမီး) ဖြစ်သူက 16.1.2010 မှာကျရောက်မယ့် သူ့မွေးနေ့က စနေနေ့ဖြစ်နေလို့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မွေးရက်ထပ်တဲ့အကြောင်း လာပြောတာကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာလေး ရှိလို့ ချက်ခြင်း ကောက်ရေးပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မွေးရက် (အင်္ဂလိပ်ရက်) ဟာ ကိုယ်မွေးနေ့(တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ . . . စသည်တို့နဲ့) ထပ်တူ ဖြစ်နေတာကို ပြောတာနော်။ မြန်မာရက်ကို မယူရပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ရက်ကို ယူမှ အမှန်ရပါမယ်။
ဒီကိစ္စဟာ အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါဘူး။ (၆)နှစ်(၇)နှစ်မှ တစ်ခါလောက် ဖြစ်တတ်တာပါ။ ဒါလည်း ပုံသေမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့လည်း (၁၀)နှစ်လောက်ရှိမှ တစ်ခါထပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲကိစ္စမို့လို့ ဒီလို မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်ခဲ့ရင် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆကြတာများပါတယ်။ (ဖြစ်ခဲလှတာကိုး)။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်က ဒီလိုဘဲ ထင်ခဲ့ ဘူးပါတယ်။ မိတ်ဆွေရော ဒီလို ထင်ပါသလား?။
မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျရောက်တဲ့ မွေးရက်မှာ ကိုယ့်မွေးနေ့နဲ ထပ်ခဲ့ရင် အဲဒီ နှစ်မှာ “ကျန်းမာရေး” အထူးညံ့တတ်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု နဲ့ Accident တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ထပ်တဲ့အခါတိုင်း အမြဲတမ်းဖြစ်မယ်လို့မပြောနိုင်ပေမယ့် “အဖြစ်များ” ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတိပြုနိုင်အောင် တင်ပြ ပေးလိုက် တာပါ။
ဗေဒမိတ်ဆွေ ကိုရန်းဂန်းရဲ့ အဆိုအရတော့ “လူမှုရေး ပြဿနာကြီးတွေ” လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အောက်မှာ သူ Comment ၀င်ပေး ထားပါတယ်။
သိပ်ဝေးဝေး ပြန်မကြည့်ပါနဲ့။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ “Pop ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်” ဟာ သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်မှာ မွေးတဲ့ “သောကြာသား”ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2008 ခုနှစ် သူ့အသက် (၅၀)ပြည့်တဲ့ သြဂုတ်လ(29)ရက်နေ့ဟာ “သောကြာနေ့” ဖြစ်ပြီး မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မယုံရင် မနှစ်က ပြက္ခဒိန်ကို ပြန်လှန် ကြည့်လိုက်ပါ။
နောက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့။ ကျွန်တော်က “ဗုဒ္ဓဟူး” သားပါ။ ကျွန်တော် ရေနစ်ပြီး Accident ဖြစ်ခဲ့တဲ့ 1979 ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၁)ရက်နေ့ မွေးနေ့ဟာလည်း “ဗုဒ္ဓဟူး” ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ 2001 ခုနှစ် “အူရောင်ငန်းဖျား” အသည်းအသန်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံပေါ်မှာ တစ်လလောက်တက်ခဲ့ရတဲ့နှစ်က မွေးနေ့ဟာလည်း “ဗုဒ္ဓဟူး” နေ့ပါဘဲ။
ကျွန်တော့်အမေက ဇွန်လ (13)ရက်မွေးတဲ့ အင်္ဂါသမီးပါ။ 2006 ခုနှစ် သူ့မွေးနေ့ဟာ မွေးနေ့မွေးရက်ထပ်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ ပါဘဲ။ အဲဒီနှစ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတုန်း စက်ဘီးဝင်တိုက်ခံလိုက်ရလို့ လက်ကျိုးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီနှစ်မှာဘဲ ၀မ်းအကြီးအကျယ်လျှောပြီး Dehydration ဖြစ်လို့ ဆေးရုံ တင်လိုက်ရပါသေးတယ်။
ပြောရရင်တော့ အများကြီးဘဲခင်ဗျ။ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မွေးနေ့တွေကိုလည်း တိုက်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ တော်တော်များများ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးကို တိုတိုဘဲရေးမယ်လို့ ပြောထားလို့ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့လေးတွေထဲက မွေးရက်မွေးနေ့ တိုက်တဲ့နှစ်တွေမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။ ဘယ်စာအုပ် ထဲကမှ တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိချက်ပါ။ (စာအုပ်တွေထဲမှာရှိချင်လည်း ရှိမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တော့ မဖတ်ဘူး သေးဘူး)။
သိပ်ကြောက်သွားအောင် ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ သတိထားနိုင်အောင် ပြောတာပါ။ ဘာမှ မဖြစ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2007 ခုနှစ်မှာလည်း ကျွန်တော့်မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီနှစ်ကတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မဖြစ်လိုက်ဘူး ခင်ဗျ။ ဒါမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ဤဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အမှန်မှာ ကိုယ့်မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်ခဲ့လျှင် အညံ့များ ဖြစ်တတ်ကြောင်း(မှန်းဆချက် မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့သုတေသနပေါင်းများစွာဖြင့်) ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ထပ်တူကျခဲ့လျှင် အစစ အရာရာ “သတိ” ဖြင့် နေထိုင်ကျင့်ကြံကြစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ “ခုတ်ရာ တလွဲ ရှရာတခြား” ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Comment များအရ တစ်ချို့ သိပ်ကြောက်နေကြပါသည်။ တစ်ချို့က ကျွန်တော့်အား တိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 2007 ခုနှစ်မှာ မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်ပါသည်။ ဘာအဆိုးမှ မဖြစ်ပါ။
မဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ယခင်နှစ်များအတွေ့အကြုံအရ ထိုနှစ်တွင် “ကုသိုလ်” ကို များများလုပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပြီး အနေအထိုင် အစားအသောက် အထူးဆင်ခြင်ပါသည်။ “၀ိပဿနာ” ကို ဖိလုပ်ပြီး “အကုသိုလ်” စင်ကြယ် အောင် အားထုတ်နေထိုင်ပါသည်။ “မိမိစိတ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း” ကို အမှတ်ရလျှင် ရသလို လုပ်ပြီး “စိတ်, ကိလေသာ” အညစ် အကြေးကို အစဉ်ဆေးကြော နေပါသည်။ ရလဒ်မှာ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး အဆိုး မည်သို့မျှ မဖြစ်သည့်အပြင် နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်တွင် “ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပါ” ၀ယ်နိုင်လိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်စေလို၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ရာတွင်လည်း နည်းပေါင်းစုံ ရှိသည့်အနက် “၀ိပဿနာ” ရှုခြင်း ကုသိုလ်လောက် အားကောင်းသည့် ကုသိုလ်မရှိပါ ။ အကောင်းဆုံး ယတြာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လူတိုင်းလုပ်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ “၀ိပဿနာ” ရှုခြင်းသည် အတုမရှိ မြင့်မြတ်လှသည့် “နိဗ္ဗာန်” ကိုပင် မျက်မှောက် ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ရာ သာမန် လောကီကိစ္စ ပြဿနာများလောက်ကတော့ ထည့်တွက်စရာပင် မရှိပါ။ လောကီ လောကုတ္တရာ စွယ်စုံရသည့် ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက ပြောဘူးပါတယ်။ “၀ိပဿနာ” ရှုမှတ်ပြီး ကိလေသာ အညစ်အကြေးကို တစ်ရက် ရှုမှတ် ဆေးကြောနိုင်လျှင် တစ်ရက် အဆိုးလွတ်တယ်၊ တစ်လ ရှုမှတ် ဆေးကြောနိုင်လျှင် တစ်လ အဆိုးလွတ်တယ်၊ တစ်သက်လုံး ရှုမှတ် ဆေးကြောနိုင်လျှင် တစ်သက်လုံး အဆိုးလွတ်တယ်” ဟူ၏။ အကြွင်းမဲ့ လက်ခံပါ၏။
ဘ၀မှာ အဆင်မပြေမှု အခက်အခဲပြဿနာများ အမြဲရင်ဆိုင်နေရသူများ “၀ိပဿနာ” ကို ရှုမှတ်ကြည့်ကြစမ်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အခက် အခဲတွေ တစ်စ တစ်စ ပြေလည်လာပြီး ချောမွေ့လွယ်ကူတဲ့ ဘ၀ကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းရောက်ရှိ လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍန်မှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ ဣသာမစ္ဆရိယ၊ သောက၊ ဗျာပါဒ တွေ နည်းပါးလာတော့ “အကြောင်း အကျိုး” နိယာမအရ ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာရခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေပြီး လက်တွေ့အကျိုးခံစားနေရသူပါ။
၀ိပဿနာ များများလုပ်လေ ဘ၀ကို ပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့လာလေ ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့မို့ ယုံကြည်ကြစေချင်ပါတယ်။ သိပ်ခက်တယ်ထင်ရင် ခက်နေမှာဘဲ။ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တော့လည်း သိပ်မခက်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကို စိတ်နဲ့ ပြန်စောင့် ကြည့်နေတာ ၀ိပဿနာပါဘဲ။ အမြဲ စောင့်ကြည့်နေတော့ ကိလေသာစိတ်တွေ ၀င်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ ၀င်လာ ရင်လည်း ကိုယ်က သိလိုက်တော့ ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ နေရင်းထိုင်ရင်း၊ သွားရင်းလာရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ စကားပြောရင်း၊ သတိရရင် ရသလို ကိုယ့်စိတ်ကို စောင့်ကြည့်ကြပါ။ ပထမပိုင်း ၀ီရိယစိုက်ပြီး အားထုတ်နေရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ “အကျင့်” ဖြစ်သွားပြီး အားစိုက်စရာ မလိုအောင် ဖြစ်လာမယ်။ စိတ်က သူ့ဟာသူ Automatic စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကျင့်သုံးကြည့်ကြပါ။ အကျိုးထူးလာပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
(၇)ရက်သားသမီးများ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့များဖြစ်ကြပါစေ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 57 Comments	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဒီဇင်ဘာလ ဟောကိန်းများPublished December 1, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလ ဒီဇင်ဘာလဟာ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ကောင်းအား/ ဆိုးအား ပြင်းထန်ပြီး အကျိုးပေးမှု ထင်ရှားသိသာ နိုင်တဲ့ လ, တစ်လ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ အထူးသတိထားရမယ့် နေ့သားသမီး တွေကတော့ “တနင်္လာ၊ စနေ နဲ့ သောကြာ” သားသမီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ စနေက ကောင်းကွက် ရှိနိုင်သေးတယ်။ တနင်္လာ နဲ့ သောကြာ သားသမီးများ အထူး သတိထားရပါမယ်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံး “ကံဇာတာ အကျဉ်းချုပ်ကလေး” ချရေးကြည့်ရအောင်။
ယခုလ(ဒီဇင်ဘာလ) ၇ရက်သားသမီး ကံဇာတာ အကျဉ်းချုပ် = တနင်္လာ၊ သောကြာသားသမီး (အလွန့်၊ အလွန်ညံ့)
= စနေ သားသမီး (အလွန်ညံ့)
= ကြာသပတေး သားသမီး (ကောင်း/ ဘေးဥပဒ် မကင်း)
= တနင်္ဂနွေ ၊ ရာဟု သားသမီး (ကောင်း)
= ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး (အလွန်ကောင်း)
= အင်္ဂါ သားသမီး (အလွန့်အလွန်ကောင်း) ဆိုပြီးတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ကျန်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုတော့ အပေါ်ဖက်က “လစဉ်ဟောကိန်းများ” မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ မသွားတတ်ရင် ဒီနေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ရောက်သွားပါ လိမ့်မယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 13 Comments	# နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များPublished November 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီစာအုပ်ကလေးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ မှည့်ခေါ်တတ်တဲ့ နာမည်တွေ နဲ့ ဘ၀အကျိုးပေးကို လက်တွေ့ လေ့လာ သုတေသနပြုပြီး ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းသွက် စာအုပ် ဖြစ်ပေမယ့် စာအုပ်တိုက်တွေက ငွေမှန်မှန် ရှင်းမပေးတာကြောင့် စိတ်တိုပြီး ဆက်မရိုက် ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အိမ်မှာလည်း လက်ကျန် စာအုပ် (၃)အုပ်လောက်ဘဲ ကျန်တော့တာမို့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း PDF အဖြစ် ပြောင်းပြီး Download ချပေးပါမယ့်။ Up Load တင်ရတာ ခက်လို့ အခန်းတွေ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရင် အခန်း (၁)ကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အခန်း (၁)ကို မဖတ်ရင် တစ်ချို့ ဝေါဟာရတွေကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပါ။ နောက်မှ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေ့နံအက္ခရာပါတဲ့ အခန်းကို ဖတ်လို့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အချက်က ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ နာမည်တစ်လုံးစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေဟာ ပုံသေမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့နာမည်တွေက သူနဲ့ တွဲဖက်တဲ့ နာမည်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ကောင်းအား/ဆိုးအား – အပြင်း/အပျော့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နာမည် (၃)လုံး ရှိရင် အလယ်စာလုံးက သိပ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။ အရေးကြီးတာ နာမည် ရှေ့ဆုံး နဲ့ နောက်ဆုံး အလုံးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို အပေါ်ဖက်က “နာမက္ခရ” အခန်းထဲမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါ “Link” တွေကို နှိပ်ပြီးတော့ လည်း သွားနိုင်ပါတယ်။
# အခန်း (၁) နာမည်အခြေခံများ
# အခန်း(၂) တနင်္လာနေ့နံ အမည်များ
# အခန်း (၃) အင်္ဂါနေ့နံ အမည်များ
# အခန်း (၄) စနေနေ့နံ အမည်များ
# အခန်း (၅) ကြာသပတေးနေ့နံအမည်များ
# အခန်း (၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံ အမည်များ
# အခန်း (၇) သောကြာနေ့နံ အမည်များ
# အခန်း (၈) တနင်္ဂနွေနေ့ အမည်များ .
ဒီနာမည်တွေထဲမှာ မပါသေးတဲ့ နာမည်များ/ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နာမည်များ ရှိရင် အောက်က Comment ထဲမှာ ၀င်ရောက်ဖော်ပြ ပေးပါ။ ဖြည့်စွက်ပေးပါမယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်နာမည် မကောင်းဘူးဆိုပြီး အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျ မသွားဖို့ပါဘဲ။ တစ်လုံးခြင်း အဓိပ္ပါယ်မှာ မကောင်းပေမယ့် တွဲစပ်မှုအရ ကောင်းသွားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ “ပုံသေ” ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 19 Comments	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် နိုဝင်ဘာလ ဟောကိန်းများPublished November 5, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
(နိုဝင်ဘာလ) ၇ရက်သားသမီး ကံဇာတာ အကျဉ်းချုပ်
= အင်္ဂါ၊ သောကြာသားသမီး (အလွန်ညံ့)
= တနင်္လာ၊ ကြာသပတေး သားသမီး (ညံ့)
= ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး (သင့်)
= တနင်္ဂနွေ ၊ စနေ ၊ ရာဟု သားသမီး (ကောင်း)
ဒီလမှာ ထူးခြားချက်ကတော “အလွန့်အလွန် ညံ့” နဲ့ “အလွန်ကောင်း” အဆင့်များ မပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီလဟာ (၇) ရက်သားသမီးများ အတွက် အကောင်းအဆိုး မျှတမယ့် လ, တစ်လလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးကတော့ ရာသီ အကူးအပြောင်းလည်း ဖြစ်လို့ (၇)ရက် သားသမီးအားလုံး ဆက်ပြီး သတိထားသင့်ပါသေးတယ်။ ဒီလ (နိုဝင်ဘာလ) ထဲမှာလည်း တော်တော်များများ ဖျားနာကြလိမ့်ဦးမယ်။
နာမည်တွဲလုံး အလိုက် ကံဇာတာ အဆိုး/အကောင်း = တနင်္ဂနွေ စ , တနင်္လာ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန်ကောင်း)
= တနင်္ဂနွေ စ , တနင်္ဂနွေ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန်ကောင်း)
= ကြာသပတေး စ , ကြာသပတေး ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန်ကောင်း)
= ကြာသပတေး စ , တနင်္လာ ဆုံး / တနင်္လာ စ , ကြာသတေး ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (ကောင်း/ဆိုး ရောနှော)
= ရာဟု စ , တနင်္ဂနွေ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (ကောင်း) (ရ ၊ ဠ = ရာဟု)
= ဗုဒ္ဓဟူး စ , တနင်္ဂနွေ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (ကောင်း/ဆိုး ရောနှော) (ယ၊ လ၊ ၀ = ဗုဒ္ဓဟူး)
= အင်္ဂါ စ , အင်္ဂါ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (ညံ့)
= ဗုဒ္ဓဟူး စ , သောကြာ (သို့) သောကြာစ , ဗုဒ္ဓဟူး ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (ညံ့)
= သောကြာ စ , စနေ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန်ညံ့) = သောကြာ စ , ကြာသပတေး ဆုံး (သို့) ကြာသပတေးစ , သောကြာဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန်ညံ့) = သောကြာ စ , သောကြာ ဆုံး နာမည်ပိုင်ရှင်များ (အလွန့်အလွန်ညံ့)
အသေးစိတ် ရေးသားချက်များကို အပေါ်ဖက် “လစဉ်ဟောကိန်းများ” ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ “နိုဝင်ဘာလ” ထဲတွင် ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုပါရန်။ သို့မဟုတ် ဒီနေရာကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် နိုဝင်ဘာလ ဟောကိန်းများ, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,792)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,989)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,846)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,393)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,454)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,589)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,614)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,975)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,307)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,274)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,110)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,844)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,811)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,137)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,503)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,187)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,684)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,656)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,554)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,266)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,245)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,912)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,699)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,029)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !